자진 입대 미얀마 청년들 "얼굴 가릴 필요 없다" 말한 이유 - 오마이뉴스
프리미엄 나는 미얀마 기자다 ㅣ 12화
[긴급캠페인 : 나는 미얀마 기자다 - 위기의 저널리즘 복원 프로젝트] 시민방위군은 지금
21.10.15 18:55ㅣ최종 업데이트 21.10.15 21:35
지난 5월 5일 미얀마 민족통합정부(NUG, National Unity Government)는 연방총리의 권한으로 군사 쿠데타 반란세력의 잔혹한 탄압으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 시민방위군(PDF, People's Defense Force) 창설을 공식 선언하는 행정명령을 내렸다.
선언 내용에는 군사반란을 일으킨 쿠데타 세력이 합법적인 국민의 정부로부터 국가 권력을 무력으로 찬탈했을 뿐만 아니라, 정부 지도자들을 불법 체포하고 구금한 사실을 명시했다.
더불어 쿠데타 세력에 반대하는 시민이 반인륜적이고 폭력적인 방식으로 살해당했고 초법적 체포와 투옥이 이뤄지고 있으며, 연방주의를 위해 투쟁하는 소수민족 단체와 국경지역 민간인에 무차별 공습이 가해지는 등 이루 헤아릴 수 없을 정도로 많은 전쟁범죄가 자행됐다고 재차 고발했다.
민족통합정부는 시민방위군 편제에 대해서도 소개했다. 시민방위군은 남부사령부, 북부사령부, 중앙군사령부, 서부사령부, 동부사령부로 구성되어 있다. (각 사령부의 위상은 우리나라 군단과 같다 -번역자 주)
사령부 이하 각 지역(주 단위)에는 장성급 지휘관이 배치되어 사단(Division)을 이루며, 사단장은 예하에 최소 3개 여단(Brigade)을 두고 통솔한다. 1개 여단은 3개 대대(Battalion)로 구성되었다.
대령급 장교가 여단을 지휘하며, 예하 3개 대대는 보병대대, 포병대대, 특공대대로 편제가 나눠진다. 각 대대는 중령급 장교가 지휘하며 소령급 장교가 대대 부지휘관으로 그를 보좌한다. 1개 대대는 4개 중대(Company)로 구성되며, 각 중대를 대위급 장교가 이끈다. 1개 중대는 3개 소대(Platoon)로 이루어졌다.
1개 소대는 위관급 초임장교가 지휘하며 3개 분대(Squad)로 구성되었다. 1개 분대는 부사관 2명이 분대장과 부분대장을 맡고 나머지 8명은 일반 병사이다.
민족통합정부는 성명서를 통해 시민 방위군의 편제에 대해 상세히 명시했지만, 주둔지와 작전지역은 보안상 기밀유지를 이유로 공개하지 않았다. 민족통합정부의 연방 국방부 장관은 시민 방위군이 현재 약 3만여 명의 병력을 보유하고 있다고 밝혔다.
군사반란 세력이 시민들의 평화 집회를 무자비하게 진압한 이후 청년들은 군부독재 타도를 목표로 무장 투쟁을 선택했다.
지난 9월 7일 민족통합정부 임시대통령 두와라실라(Duwa Lashi La)는 무장 투쟁을 이어가고 있는 시민들과 소수민족 단체에 "쿠데타 세력과 그 추종자에 대항해 싸워 군부 통치를 무너뜨릴 것"을 촉구하며 총력적 저항 전쟁을 선포했다. 민족통합정부는 쿠데타 세력에 대항하고 있는 반군부독재 세력을 규합해 더 효율적인 방식으로 싸움을 이끌어 나가기를 희망하고 있다.
민족통합정부의 선포 이후 농촌지역은 물론 도시지역으로도 교전이 점차 확산되고 있다. 이런 가운데 수없이 많은 청년들이 온갖 악조건으로 가득한 밀림과 산 속에서 고난을 견디며 군사훈련을 받고 있다. 군사훈련을 받고 있는 시민 방위군 청년들은 "군부독재 타도를 위한 대의에 목숨을 걸었기 때문에 굳이 얼굴을 가릴 필요가 없다"고 밝히며 훈련모습과 생활상을 공개했다.
현재 시민 방위군은 무기와 식량을 마련하기 위한 지원을 필요로 하고 있다. 그들은 현장의 상황을 생생히 보여주며 시민들에 재정적 지원을 부탁한다는 절실한 바람을 전해왔다.
ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကို တော်လှန်ဖို့ သင်တန်းတက်နေတဲ့ PDF လူငယ်များ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ( People's Defense Force (PDF)) ကို ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့်အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ၌ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်၏ အမိန့်ဖြင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည် တရားဝင် ပြည်သူ့အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ရယူကာ အစိုးရခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သော ပြည်သူများကိုလည်း အကြမ်းဖက် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း၊ ဖယ်ဒရယ်အရေး ကြိုးပမ်းနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူများအပေါ် လေကြောင်းစစ်ဆင်မှု အပါအဝင် အင်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုကာ တိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့ကျူးလွန်နေသည်ဟု ဆိုကာ ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ အခြားအကြောင်းအရင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာချုပ် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တိုင်းစစ်ဌာချုပ် (Division) တစ်ခုတွင် တပ်မဟာ (Brigades) သုံးခုအနည်းဆုံး ဖွဲ့စည်းပါဝင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်အရာရှိက တိုင်းမှူးအဖြစ် ကွပ်ကဲသည်။
တပ်မဟာတစ်ခုတွင် ခြေလျင်တပ်ရင်း (Battalions) သုံးရင်း၊ အမြောက်တပ်ရင်းတစ်ရင်းနှင့် အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းတစ်ရင်းတို့ ပါဝင်ကာ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် အရာရှိက တပ်မဟာမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူကွပ်ကဲသည်။
တပ်ရင်းတစ်ခုတွင် တပ်ခွဲ (Company) လေးခွဲပါဝင်ပြီး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့် အရာရှိက တပ်ရင်းမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဗိုလ်မှူးအဆင့် အရာရှိက ဒုတပ်ရင်းမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူသည်။ တပ်ခွဲတစ်ခွဲတွင် တပ်စု (Platoon) သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် အရာရှိက တပ်ခွဲမှူးအဖြစ် ကွပ်ကဲသည်။
တပ်စုတစ်စုတွင် တပ်စိတ် (Squad) သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ ဗိုလ်အဆင့် အရာရှိက တပ်စုမှူးအဖြစ် ကွပ်ကဲသည်။ တပ်စိတ်တစ်စိတ်တွင် အင်အား ၁၀ ဦးပါဝင်ကာ တပ်ကြပ်တစ်ဦး၊ ဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦးနှင့် တပ်သား ရှစ်ဦးဖြစ်ပြီး တပ်ကြပ်သည် တပ်စိတ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ယူကွပ်ကဲသည်။
သို့သော် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုမည်သည့်ဒေသတွင် အခြေစိုက်မည်ဆိုသည့်အချက်များကိုမူ NUG ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန)ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်အင်အား ၃၀၀၀၀ခန့် ရှိလာမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ရက်စက်စွာပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးနောက် လူငယ်အများအပြား စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းရန် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၌ NUG ၏ ယာယီသမ္မတ ဦးဒူဝါ လရှီးလသည် အရပ်သား ကာကွယ်ရေး တိုက်ခိုက်သမားများအား အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီနှင့် ၎င်း၏ အပေါင်းအပါများကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း စစ်အစိုးရကို ဝိုင်းဝန်းတွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ရန် လှုံ့ဆော်ကြောငြာလိုက်သည်။
NUG အစိုးရသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သောအင်အားစုများကို တစုတစည်းနှင့် ပိုမိုထိရောက်သောပုံစံဖြင့် စစ်ကောင်စီအား တိုက်ထုတ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်နေသည်။
ပြည်တွင်းစစ်က တောနယ်ရော မြို့ပြများပါ ပျံ့နှံ့လာနေသည့်အချိန်ဖြစ်သော်လည်းတောထဲတောင်ထဲတွင် ဒုက္ခမျိုးစုံကို သည်းခံကာ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက် စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေသည့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ( PDF ) ၀င်လူငယ်များအကြောင်းကို ပြည်သူများသိရှိစေရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။
စစ်သင်တန်း၌ PDF လူငယ်များသည် စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အသက်ကိုပင်စွန့်ထားသူများဖြစ်သည့် အတွက် မိမိတို့၏ မျက်နှာများကို ဖုံးကွယ်ရန် ( မျက်နှာအုပ်ပေးရန် )မလိုသလို ခွင့်ပြုဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များသည် လက်နက်၊ ရိက္ခာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အကူအညီများစွာလိုအပ်နေပြီး ငွေရေးကြေးရေးအရ ပြည်သူများလှုဒါန်းဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုထားသည်။
이전글 '나는 미얀마 기자다' 프로젝트, 후원금 1000만 원 돌파
다음글 머리에 총탄, 온몸 칼자국... 미얀마 그곳에선 시체가 쌓여간다
이전글 '나는 미얀마 기자다' 프로젝트, 후원금 1000만 원 돌파 머리에 총탄, 온몸 칼자국... 미얀마 그곳에선 시체가 쌓여간다 다음글